Munaasabada Xuska Maalinta Haweenka Aduunka 8 March 2015 Oo Caasimada Deegaanka Ee Jigjiga Siwayn Looga Xusay - Cakaara News
Munaasabada Xuska Maalinta Haweenka Aduunka 8 March 2015 Oo Caasimada Deegaanka Ee Jigjiga Siwayn Looga Xusay
Jigjiga(CN) Axad.Mar.08.2015, waxaa maanta siwayn looga xusay caasimada deegaanka ee jigjiga xuska maalinta haweenka aduunka ee 8 March 2015 oo dhamaan caalamka laga xusayo markii 104 aad halka dalkeenana laga xusayo markii 39aad.
Munaasabadan oo ahayd mid maal mahan caasimada deegaanka laga dareemayay u diyaar garowgeeda ayaa saaka ka dhacday hoolka shirarka ee Sayid MCX.
Waxaana ka soo qayb galay masuuliyiinta sare ee xukuumada DDSI oo ay ka mid yihiin ku simaha madaxwaynaha DDSI ahna wasiirka xafiiska madaxtooyada marwo Sucaad Axmed Faarax, madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xasan, golaha wasiirada DDSI, masuuliyiinka xafiiska arimaha haweenka iyo dhalinyarada, odayaal dhaqameedka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimada deegaanka.
Munaasabadan xuska maalinta haweenka oo ha lku dhig looga dhigay "ka qaybgalka awooda haweenka oo kor loo qaadaa waa awooda bulshada oo kor loo qaaday" Ayaa waxaa ugu horayntii khudbad dheer ka soo jeedisay ku sii simaha madaxwaynaha DDSI ahna wasiirka madaxtooyada DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax.
Waxayna ugu horayntii siwayn ugu halbalyaysan xuskan maalinta haweenka aduunka dhamaan haweenka deegaanka meel kasta oo ay joogaanba waxayna sheegtay in xuskani ku soo beegmay xili dalka iyo deegaankuba gaadheen horumar buuxa iyo waliba xili laga xusyay deeganka iyo dalka munaasabado muhiim oo xaqiijinaya ka qayb galka hawenka oo dhinaca kasta ah.
Waxaa kale oo ay ka marwo Sucaad si mug leh uga warbixisay in ay munaasabadani sanadkan xili uu XDSHI xaqiijiyay xilwayna iska saaray sugida iyo xaqiijinta xuquuqaha haweenka DDSI iyo waliba xili siwayn ugu diyaar garobayno doorashada heer qaran ee dhicidoonta bishan fooda inagu soo haysa taasi oo ay haweenku door wayn uu dhaxal gal ah ku leeyihiin .
Iyada oo ku simaha madaxwaynuhu hadalkeeda sii wadata ayaa waxay sheegtay in ay xuskani ku soo beegmay wakhti ay haweenka deegaanku hanteen xaquuqaha siyaasada, horumarka, dhaqaalaha iyo kuwa bulshadaba kana baxeen haweenka deegaanka cadaadiskii hore uga haystay xaga dhaqamada xun xun iyada oo ugu danbayntii ku boorisay haweenka deegaanku in ay ka soo baxaan waajibaadkooda saaran kana faa’iidaystaan fursadaha qaaliga ah ee ay heleen.
Dhankeeda waxaa iyaduna kulankaasi ka hadashay ku simaha xafiiska arimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada marwo Saynab Xaaji waxayna si qoto dheer uga warbixisay geedi socodkii taariikheed ee haweenka heerka ay ka taagnaayeen nolosha guud ee bulshada taasi oo ay sheegtay in ay ahaayeen kuwo ka takooran qaybaha kale oo bulshada.
Waxayna sheegay ku simaha wasiirka xafiisku in ay maanta munaasabadan loo dabaal dagayaa kaga duwan tahay kuwii hore wakhti ay haweenka deegaanku hanteen xuquuqihii hore uga maqnaa kuwii ugu waawaynaa xili uu XDSHSI siiyay haweenka deegaanka meeqaamkii iyo doorkii ay ku lahaayeen dhamaanba laamaah dawlada sidoo kale ka dhigeen xildhibaanada deegaanka xisbigu 35% kana soo bixidoonaan haweenka kaalinta kaga aadan hirgalinta qorshayasha horumarineed.
Xafladan munaasabada xuska 8 March 2015 oo ay ka hadleen qaarka mid ah odayaasha deegaanka iyo madaxa xafiiska arimaha haweenka caruurta iyo dhalinyarada ee maamulka magaalada jijiga marwo faaduma ayaa waxay si balaadhan uga warbixiyeen ahmiyada ay maalintani leedahay.
Ugu danbayntii waxaa haweenka deegaanku gudoonsiiyeen abaalmarino xubo si gaar ah u muujiyay dadaal dheer oo ah dhinaca horumarinta arimaha haweenka, sidoo kale waxa ay abaalmarino gudoonsiiyeen XDSHI abaalmarintaasi xisbiga ayaa waxaa u gudoomay xisbiga madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka xafiiska madaxtooyada iyada oo ay gudoonsiisay madaxwayne ku xigeenka ahna ku simaha madaxwaynaha DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax.